KEDU ETUO OLE YOUTUBE GA - ENWETA: NCHỊKỌTA ỤZỌ NA ỌWA - AKỤKỌ - 2019
Ego na ole ka YouTube nwetara
Kedu ihe nwute na-esi enweta akụkọ ntolite taa. Ụfọdụ ndị na-edepụta onwe ha na ọrụ YouTube na-ewu ewu jisiri ike mezuo ihe yiri ihe na-agaghị ekwe omume - iji mee ka ntụrụndụ na ọchịchọ onwe onye ghọọ isi iyi nke ezigbo ego, iji mepụta ihe omume vidio dị elu site na ncha, ma n'otu oge ahụ ịghọ ụwa a ma ama.
Ihe kpatara ndi mmadu ji enweta ogwu na YouTube nwere ike iche. Onye na - akwalite azụmahịa nke aka ha, onye na - agbalị igosipụta onwe ya, onye na - esetịpụ ihe mgbaru ọsọ ozugbo - iji mepụta TV n'onwe ya na Intaneti, na - eweta ego na - adịgide adịgide. Mana eziokwu ahụ ka dị: ọnụọgụ ndị ọrụ ọhụrụ na vidio ndị e gosipụtara na ọrụ na-eto eto kwa ụbọchị.
Kedu ihe niche kachasị mma maka ọwa YouTube?
Ohere Video Njem
Ọwa vidiyo banyere nkà na ụzụ ọhụrụ
Ọwa vidiyo banyere ihe nzuzo nzuzo
Ngosi vidiyo maka nne na - eto eto na ndi na - akwadebe ibu nne
Ọwa vidiyo banyere mmemme kọmputa
Ụzọ iji mee ego na YouTube
Na mmemme mmemme
Na nkwalite ngwongwo
Na nkwalite nke rollers mba ọzọ
Na mmasị nke vidiyo ndị ọzọ
Na mgbasa ozi ezo
Ego ole ka onyinye YouTube
1. EeOneGuy (Ivangai)
2. Adam ThomasMoran
3. Nweta Movies
4. "Masha na agba"
5. Nke a dị mma
Ndụ mmadụ adịghị ezu ilele vidiyo niile sitere na YouTube nke dị na netwọk ahụ n'oge ahụ. Dị ka ụfọdụ atụmatụ si kwuo, ọ ga-ewe otu puku afọ na-enweghị nkwụsị maka nri na ụra. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-amụba kwa oge ọ bụla, nkeji na nke abụọ.
Otu esi eguzogide n'ozuzu n'ozuzu ya, ọ bụghị ịkwatu na oke nkata na "samseberezhisserov" - ajụjụ ndị dị mkpa iji zaghachi onye edemede nke ọwa na ọrụ a ma ama. Ma gbalịa ịchọta niche ọkwà. Ma ọ bụ - họrọ ya site na nkwa kachasị mma iji bido. N'ime ha ...
Akuko banyere njem na ihe omimi di nma ga adi nma.
Akụkọ banyere njem ndị ahụ, bụ na ọ ga-adị mkpa mgbe nile. Site na ihe ngosi na-adọrọ mmasị, ha nwere ike ikpokọta ndị na-ege ntị dị mma. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị mmadụ nile ga-ekpebi, dịka ọmụmaatụ, na njem ndị njem si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ma ọtụtụ ndị ga-eji mmasị na-ekiri ihe ndị a, na-agwa maka ebe ndị dị omimi nke Sri Lanka, pickpockets nke India, nri Chopodia na ihe oriri nke Vietnam. Ihe bụ isi bụ na onye na-akọ akụkọ ahụ kwesịrị ịbụ obodo na-adọrọ mmasị, nke ịnụ ọkụ n'obi nke ọ na-ekwu okwu, na, ma eleghị anya ihe kachasị ọnụ ahịa, abụghị ihe ọchị.
Nyocha vidiyo nke nkà na ụzụ na-adọrọ mmasị ma ndị mgbasa ozi na ndị na-azụ ahịa.
Nke mbụ, ụdị egwu ndị a na-adọrọ mmasị maka ụmụ nwoke. Ngwuru okwu vidiyo obere banyere otú nke a ma ọ bụ ngwaọrụ ahụ si arụ ọrụ. N'okwu a, a na-egosipụta ọganihu niile na nkà na ụzụ nke ọma dịka okwesiri - n'emeghị ihere na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọwa vidio a na-enyere aka ịghọta ma ọ bara uru ịzụta ụdị ngwaọrụ a ma ọ bụ ka ị ṅa ntị na nke ọzọ. Ọtụtụ mgbe, mgbasa ozi YouTube banyere nkà na ụzụ na-aghọ nke dị elu nke na ndị nrụpụta nyere ndị edemede ha iwu ịkpọsa ngwaahịa ọhụrụ ha. Ma kwere ka ime ya ka ọ dị ọcha na unobtrusive, nke mere na onye na-ekiri anaghị eche "aghụghọ" ahụ. N'ihi ya, onye ọ bụla nwere afọ ojuju:
na onye mgbasa ozi nke na-akwalite ngwaahịa ya n'ụzọ gara nke ọma;
na onye na-ekiri ya hụrụ ihe ọ nọ na-achọ;
na onye edemede nke blog, na-agụta uru ha.
Ụmụ agbọghọ na-ekere òkè n'otú ha ga-esi mee ka a maa mma, ma ọ bụ ihe na-adịgide adịgide
A haziri ha maka ndị na-ege ntị na nwanyi. N'osisi ahụ, ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ndị na-ekpuchi ihe nzuzo ha na-eme ka ha mata:
họrọ ihe ịchọ mma maka akpụkpọ anụ gị;
tinye etemeete n'ụzọ ziri ezi;
agha iro na ngafe kilo;
chọpụta na ọ dịkarịa ala na-agwụ ike nke ọtụtụ nri, mana kachasị dị irè;
nyochaa ihe oyiyi gị.
Ihe nzuzo nke inwe ihe ịga nke ọma na YouTube bụ ihe dị mfe - ọ bụ "mkparịta ụka nzuzo" n'etiti ụmụ agbọghọ abụọ, "otu n'ime ha na-agwa anyị otu esi eme ka ntorobịa na ịma mma na ihuenyo, nke abụọ na-egekwa ntị nke ọma ka ị nọ n'ihu nyocha.
Egwuregwu maka vidio banyere ụmụ na-enweghị ike agwụ agwụ
N'ebe ndị a na-anakọtakọ vidiyo na ọ bara uru ma ghara ịla n'iyi n'oge ha bara uru banyere ozi:
kwadebe maka ọmụmụ nwa;
hazie ihe oriri kwesịrị ekwesị nke nwanyị dị ime;
lekọta ahụ ike ya;
kwadebe maka ịmụ nwa.
Ma mgbe - mgbe amuchara nwa - ị mụta ilekọta nwa amụrụ ọhụrụ: mee ka ọ dị mma, gbanye ya ma nye ya nri. Ebumnuche maka ọwa YouTube banyere ịbụ nne na nwata nwere ike agaghị agwụ. Ọtụtụ n'ime ha ga-enwe mmasị na ndị mgbasa ozi. Ndị ahụ ga-eji obi ụtọ na-enye ndị nne na-eto eto na-eto eto "na-ekpe ikpe" ụdị ihe oriri ọhụrụ ụmụaka, ihe atụ nke ndị na-ede akwụkwọ ndị ọhụrụ e kere, nakwa ihe ụmụaka na-atọ ụtọ maka ụmụ ọhụrụ.
Ntuziaka bara uru, nyochaa usoro ihe omume na ngwaọrụ weghaara na vidiyo ga-ahụ ndị na-ekiri ha.
Nchịkọta zuru ezu na nkọwa dị iche iche banyere otu otu kọmputa si arụ ọrụ - na-amalite site na ụzọ aghụghọ nke nkwụnye ya na-ejedebe na nkwụsịtụ nke na-arụ ọrụ. Ihe okike nke vidiyo dị otú ahụ - dịka ọmụmaatụ, akụkọ banyere njem, anaghị achọ ka ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ. Enwere ezigbo vidiyo a na-ese site na nyocha ihuenyo, ya na ederede ya. Iwe na iwe. N'otu oge ahụ, a ga-eme ka onye edemede ahụ kwenye na vidiyo a mgbe niile, n'ihi na ọtụtụ ndị nwere ike itinye ihe omume, ma ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla gbalịa dozie nsogbu ahụ n'onwe ya - site n'enyemaka nke ndị ọkachamara n'Intanet.
Ndị na-ede blọgụ nwere ihe ịga nke ọma na-eji ọtụtụ ụzọ isi nweta ego na ọwa ha. Nke a bụ ngwakọta nke nhọrọ mgbasa ozi dị iche, gụnyere nke zoro ezo. Ya mere ị nwere ike ịkwụghachi ụgwọ ahụ ma nweta uru nke 50 ruo 70 puku rubles kwa ọnwa. Ọ bụ ezie na ọ na-enwe ọganihu na ịrụsi ọrụ ike, ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịdị elu. Ya mere, kedu ihe ị ga-enweta maka ndị na-edepụta YouTube?
"Ntuziaka Mgbakwunye" (ọmụmaatụ, site na Google AdSense) na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ YouTube. A na-etinye mgbasa ozi na nke a na vidiyo n'onwe ya, n'ihu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya. Dị ka a na-achị, nkwụnye ụgwọ na mgbasa ozi dị otú ahụ sitere na 70 ruo 320 rubles kwa 1000 echiche. Onye na-ede akwụkwọ onye na-ede akwụkwọ na-enweta ego a na-erughị pasent 20-30 nke nnupụisi maka usoro mmemme. N'ihi ya, ego o nwetara mgbe 1000 echiche dị ihe dị ka 260 rubles. Usoro mmemme nwere ike ime ka ndị na-ede akwụkwọ na-aga nke ọma site na 170 rubles kwa ụbọchị, ihe dị ka 5,000 kwa ọnwa, ruo 60,000 rubles kwa afọ.
Nke a bụ ụzọ kacha mma iji mee ego. Onye edemede ahụ na-arụ ọrụ na mgbasa ozi nke nwere mmasị na ndị na-ege otu ọwa YouTube. A na-atụle ego ahụ na nke ọ bụla. Ndị na-ewu ewu na-ewu ewu, ndị ọrụ ya dị oke ọnụ karị. Ndị na-ede blọgụ kacha elu nwere otu vidiyo nke meriri otu nde echiche, ga-efu ihe dị ka puku atọ rubles. Ọtụtụ mgbe, ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-edozi usoro vidiyo n'otu oge - na ntinye nke otu kwa ọnwa. Ihe ngosi ha na-agbanye n'ime usoro nke na-aga ihe dị ka ọnwa isii. N'ihi ya, ego a na - enweta na YouTube nwere ọganihu na ụdị nkwalite a nwere ike ịba mma: ruo 300,000 - kwa ọnwa na ihe dị ka 1,800,000 rubles (anyị na - ewere maka ọrụ a na - eme atụmatụ maka ọnwa isii) - kwa afọ.
Ndị na-ege YouTube na-ekpo mbara, nke dị n'aka ndị mgbasa ozi na ndị nwe ụlọ.
Ụzọ a nke ịkọ ọwa gị dị na YouTube ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị debanyere aha. Onye nwe ọwa ahụ nwere obi ụtọ na ọ ga-etinye vidiyo nke onye ọzọ - n'ezie, maka ụgwọ.
Ọzọkwa, onye okike nke ọwa YouTube na-enye echiche na-eji nsụgharị nkwalite ọzọ - na-agbakwunye adreesị nke novice blogger na mpaghara nke "Njikọ mmasị". Kwa ụbọchị (dị ka iwu, ejikọtara njikọ ahụ naanị otu ụbọchị), ego a ga-enweta maka nke a ga-eru 7,000, kwa ọnwa ndị chọrọ ịkwasa n'ụzọ dị otú a si 40,000 ruo 50,000, kwa afọ - ruo 300,000 rubles.
"Dị ka" site na YouTube a ma ama, hapụrụ na ibe onye ọrụ ibe ya, ọ na-efu 500 rubles. N'ụbọchị ahụ, ndị edemede nwere nkwalite nwere ike kesaara "iri" iri na abụọ maka ndị na-amalite, si otú a na-agbakwụnye ihe ọzọ rubles 5,000 kwa ụbọchị na obere akpa ha. N'ime otu ọnwa, a ga - ejupụta ego nke ego a na - akwụ ụgwọ maka ego 60,000-80,000, na otu afọ - ihe dị ka 400,000-500,000 rubles.
Na "mmasị" maka ndị na-amalite, ndị na-edepụta chanel na-akwalite nwere ike nweta ego ruru 5,000 kwa ụbọchị.
Ntọala ngwaahịa bụ ọrụ a chọrọ nke ọma. A na-akwụ ụgwọ YouTube kacha mma maka eziokwu ahụ bụ na ihe ụfọdụ nwere akara ngosi (dịka ọmụmaatụ, iko na akara nke a na-ewu ewu - onye na-emepụta kọfị) na-enwupụta na etiti maka sekọnd ole na ole. Ma ọ bụ, n'ihi n'eziokwu na onye edemede nke ọwa ahụ na-egosi na ihuenyo na T-shirt na aha otu ụlọ ọrụ a ma ama. Otú ọ dị, ego maka nkwalite dị otú ahụ bụ nkewa.
Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-enwe mmasị na ihe atụ nke ndị ọrụ ugwo nke mewororịrị ụgwọ ego. Na top 10 nke Russia - ọwa YouTube dị iche iche na ndị dere ede na ihe ndị a na-atụghị anya ya nke mere ka ndị mmadụ gbakwuo anya.
Ndị ọrụ nde iri na atọ na-edebanye aka na Ivan Rudsky (Ivangai)
Aha ọzọ nke a ma ama YouTube bụ Ivan Rudskoy. O nwetara ihe ịga nke ọma mgbe ọ dị afọ iri na itoolu, agbapụ vidio na ụdị egwu egwu, na-akọwa banyere ihe mgbagwoju anya nke usoro egwuregwu kọmputa na ndị edemede kwuru. A na-ewere Ivangai otu n'ime obodo YouTube ndị kasị ewu ewu na mba taa. O nwere ndị ndebanye nde mmadụ iri na atọ na ijeri echiche 3 nke ihe nchịkọta ya, bụ nke wetara ihe dị ka nde 427,000 rubles.
Maxim Golopolosov meriri ọmịiko nke ndị na-ege ya ntị n'ihi ihe ndị na-akpali mmasị ya na vidio ndị na-akpali mmasị
Onye na-ede akwụkwọ bụ Maxim Golopolosov na-enye usoro ihe omume +100500, nke nwere vidio ndị na-akpali mmasị na-ekwu okwu na-agbagwoju anya. Ndị na-ege ntị nke ọwa ahụ agafewo ihe dị mkpa nke nde mmadụ 9, na ego ndị na-arụ na rollers - akara nke nde 363 451 rubles.
Ọwa nke nwere eserese ụmụaka nwere ihe ruru nde mmadụ asaa.
Ọwa na eserese ụmụaka na ihe osise eserese ezinụlọ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha dị nde iri isii na isii, ego ole a na-akwụ gafere karịrị 223 nde rubles.
Egwuru egwu mara mma nke ọwa ahụ nwetara ihe dị ka nde rubles 204
Nchịkọta nke usoro ihe nkiri niile a na-ahụ maka obere nwa agbọghọ na nna ya maara nke ọma. Ndị debanyere ọwa ahụ dị ihe dị ka nde mmadụ 16.5. Ọnụ ego ndị creators na - enweta - 204 nde rubles.
Ihe karịrị afọ asatọ nke ọrụ, ọwa ahụ enwetala ihe karịrị nde rubles 27.
Nchịkọta ọzọ nke azụmahịa azụmahịa. Oge a - site na YouTube Stas Davydov. Ihe nzuzo nke ewu ewu ya bụ n'eziokwu na ọwa ahụ na-ezere ikwu okwu rụrụ arụ, ọ dịghị egosiputa "ịkwa iko n'okpuru eriri ahụ." Nke a dị mma. Ị nwere ike ịdenye aha n'enweghị ụjọ. Ihe emeela site na ihe ruru nde mmadụ isii. Ruo afọ asatọ nke ịdị adị, ọwa ahụ nwetara nde 27,6,620 rubles.
Ọwa ahụ nwere vidiyo dị mkpa na egwu egwu.
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ isiokwu dịgasị iche - letplay-videos, vidiyo vidio na blọọgụ si Yuri Morozilki. Ihe dị ka nde mmadụ asaa na ndebanye aha maka FROST. Enweghị enyemaka ha, onye edemede nke ọwa ahụ enwetalarị nde 572 nde rubles.
SlivkiShow - ọwa maka ịmata ihe
Uzo ajuju, nke choro vidio site na usoro "Nke a di mma" kwa izu. Ndị debanyere SlivkiShow nwere nde ndị ọrụ nchọpụta 4.5 nde. Enweta ndị na-emepụta ọwa n'oge ọ dị adị ruru nde 1301,000 rubles.
Katya Clap na-ese vidio na-akpali akpali
Katya Clap bụ otu akpa YouTube YouTube. N'ọwa ya, ọ na-egosipụta vidio ndị na-eme ka ndị na-ege ntị na-amụmụ ọnụ ọchị, tinyere vidio na-akpali akpali na-achọ maka mmụba onwe onye. Na akaụntụ nke ọwa Katie - ihe dị ka ndị ndebanye nde isii na nde iri isii na nde 662 rubles, nwetara n'oge ọnụnọ na netwọk.
Taa, ngụkọta ego sitere na ọwa Oleg Brain karịrị nde rubles 32
Lethplay-ọwa Oleg Brain. Onye edemede ahụ n'ụzọ zuru ezu na ọchị dị ukwuu na-akọ banyere otú o si gafere egwuregwu kọmputa a ma ama. Enwere ihe karịrị nde mmadụ asaa na ọwa. Onu ogugu nke Brain nile ruru nde 32 nde 820 rubles.
Ikpe ahụ mgbe onye dị afọ iri na ụma mepụtara karịa gị, ma ihe niile nke Minecraft
Roman Filchenkov kere ọwa na isiokwu dị oke nkpa - ọ na-enyocha ihe mgbagwoju anya nke ebe egwuregwu Minecraft. Otú ọ dị, nke ahụ egbochighị ya ịchịkọta ndị agha dị mma nke ihe karịrị nde mmadụ 5 ndebanye aha. Na n'ụzọ - iji nweta nde 25 nde 237 rubles.
A kwenyere na ọ naghị arụ ọrụ otu ụbọchị n'ụbọchị ndụ ya, bụ onye gbanwere ihe omume ntụrụndụ ya dị ka azụmahịa bara uru. Akụkọ banyere Russian YouTube si n'elu 10 bụ nkwenye nke a. Ọrụ YouTube maka ha abụghị naanị ọrụ. Nke a bụ ihe ntụrụndụ kachasị mma nke na-enye gị ohere ịkọrọ ndị nwere mmasị dịka gburugburu ụwa ma chọpụta talent gị. Maka ohere iji nọgide na-eme nke a, ha nwere ike ịdị njikere ịkwụ ụgwọ n'onwe ha. Mana ihe na-adọrọ mmasị karị, mgbe ihe niile na-eme n'ụzọ ọzọ: ndị mgbasa ozi na-etinye aka na ọdụ, na ego a na-enweta na-eto n'ihu anyị.
Ebee ibudata aeyrc.dll faịlụ maka Crysis 3 n'ụzọ ziri ezi
Ịzụlite nọmba na ike na Microsoft Excel
Ihe nchekwa Microsoft dị mkpa 4.10.209.0
Anyị na-ejikọ ndị ikuku ikuku na laptọọpụ
Dochie akwụkwọ isi obodo na MS Word akwụkwọ na obere
Ndị na-ebi akwụkwọ na scanners
Ntughari egwu nke ederede iji webata ya di otutu oge. A sị ka e kwuwe, e nweelarịrị usoro nnamume dị elu, ọrụ nke na-achọ ntinye aka onye enyemaka. Mmemme maka nchịkọta ederede chọrọ na ma ụlọ ọrụ ma n'ụlọ. GụKwuo
Ịgụkọta Sel Na-ejupụta na Microsoft Excel
Nkwekọrịta mmekọrịta netwọk Facebook nwere ike ịchọta ndị ọrụ site na nọmba ekwentị
https://termotools.com ig.termotools.com © Akụkọ 2019